11 Nederland waxay noqotay bulsho furfuran (liberal) - Ku soo dhowow Nederland
A Holland baad timid
01 Ku soo dhowow Nederland
02 La dagaalankii biyaha
03 Nederland iyo Yurub
B Taariikhdii Nederland
04 Nederland iyo boqortooyadeeda
05 Qarnigii dahabiga ahaa: 1600-1700
06 Xidhiidhkii debedda iyo waddamadii Nederland gumaysatey
07 Farshaxanka reer Nederland
08 Qarnigii 18-aad iyo kii 19-aad
09 Dagaalkii 2-aad ee adduunka
10 Nederland dagaalkii 2-aad kaddib: dhinaca siyaasadda
11 Nederland waxay noqotay bulsho furfuran (liberal)
12. Dadka qalaad iyo qaxootiga
C Nolosha maalin kasta
13 Ooievaarkii waa yimid
15 Nolosha qoyska
17 Kubadda cagta ee Nederland
19 Maalmaha feestooyinka ah
B Taariikhdii Nederland‎ > ‎
Kacaankii xagga galmada (sexueel)
Sannadihii lixdameeyadii ee qarnigii la soo dhaafay hab dhaqanka Nederland wuu is-beddeley. Waxay dadku doonayeen inay sharciyada Baybalka ka madax-bannaanaadaan. Sidaas daraadeed waxay rumaysteen inay bannaan tahay galmada intaan la is-guursan iyo gogol-dhaafkuba. Waxaa la bilaabay in aad loo isticmaalo waxyaalaha naaguhu uurka iskaga ilaaliyaan. Meeshii muhiimadda qoyska la siin jirey, markan qofka ayaa muhiimada la siiyey. Dumarkii waxay bilaabeen inay shaqooyin raadsadaan, oo ay muddo dheer sugaan intii ay curruur ka dhali lahaayeen.
Carruurta la iska soo tuurayo (abortus)
Dhakhtarkii ugu horreeyey ee carruurta la iskaga soo tuuro waxaa Nederland laga hirgeliyey 1971-dii. Dadkii arrintan kasoo horjeeday waxay samaysteen urur la odhan la yidhaahdo VBOK. Dadka ururkan isugu tegey waxay rumaysnaayeen in nolosha qofka bini'aadanka ah la ilaaliyo. Laga bilaabo 1984-tii in ilmo la iska soo tuuraa waa sharci. Sida la ogol yahay waxaa ilmaha la iska soo ridi karaa 24-ka usbuuc ee ugu horeeya uurka gudahooda. Naagta ayaana go'aanka iska leh.
Nafta oo la iska qaado (euthanasie)
'Euthanasie' waa dilka nafta bini'aadanka iyadoo codsigu ka imaanayo qofka doonaya inuu dhinto. Tan waxaa kaloo loogu yeedhaa is-dilka la ogol yahay. Laga bilaabo 1973-dii, hay'ado badan ayaa u doodayey in arrintan la sharciyeeyo, tobankii sanno ee lasoo dhaafayna dad badan oo reer Nederland ah ayaa arrintan ogolaanayey. Laga bilaabo 2002-dii is-dilka noocani ahi dembi ma ahayn, haddii dhowr sharci la buuxiyo. Waxaana la sameeyey guddi baadha in sharciyadan la buuxiyey iyo in kale. Sharciyadan laba kamid ahi waa: 1) Dhaktarku waa inuu caddeeyo in qofka jirani arrintan is-dilka si fiican uga fekerey, iyadoo aan qofna ku khasbayn. 2) Dhakhtarku waa inuu xaqiijiyo in nolosha qofkaa jirrani ahayd mid ku sugan xannuun joogto ah, oo aan loo adkaysan karin. daawona lahayn.
Nederland waxaa kaloo lagu yaqaanaa sharciyo daroogada khuseeya oo furfuran, ama sahlan, taasoo aan waddamo badan oo kale jeclayn. Nederland daroogada laba nooc bay u kala qaybisay: Daroogooyinka fudud (hasj/xashiishada iyo wiet) iyo daroogooyinka culus. Daroogooyinka oo dhammi waa sharci-darro, laakiinse haddii sharciyo gaar ah la buuxiyo xashiishadda iyo wiet-ka waa la isticmaali karaa.
April 1-deedii, 2001-dii ayaa Nederland ogolaatay inay laba nin amase laba naagood is-guursan karaan. Tanoo Nederland ka dhigaysa waddankii ugu horreeyey ee sharciyeeya is-guursiga khaniisiinta. Waddamo kale ayaa markii dambe kusoo biiray, kuwaasoo ay kamid yihiin: Belgium, Canada, Spain, iyo Koonfurta Afrika.
Kaniisadihii waa la baneeyey.
Haddaba sidee ayay Nederland waddan 'liberal' ama furfuran sidaa ugu noqotay? Tan waxaa gaar ahaan sabab u ah inay dad badan oo reer Nederland ah diintii Masiixiyadda ka tageen. Kaniisadda ma tagaan. Tirada dadka aan Ilaah rumaysnayna way sii kordhaysaa. Dad badan oo kalena waxay rumaysan yihiin in awood inaga sarraysaa jirto, laakiinse aan la garanayn waxa ay tahay.
Subpages (1): Nederlandse vertaling